Daawo:-Dagaal Beeleed ka qarxay Gobalka Galgaduud | Koonfur Galbeed News
HomeArimaha GudahaDaawo:-Dagaal Beeleed ka qarxay Gobalka Galgaduud
Daawo:-Dagaal Beeleed ka qarxay Gobalka Galgaduud
Xiisaado colaadeed ayaa ka soo cusboonaaday qeybo kamid ah gobalka Galgaduud gaar ahaan degmadda Ballanballe.
Xiisadaan colaadeed ayaa waxee ku soo beegmaysaa xili ee dalwadda federalka Soomaaliya ee sheegtay in ee u fidisay gogol dib u heshiisiineed magaaladda Dh/mareeb beelaha gobalka.
Beellaha dega gobalka Galgaduud ayaa mararka qaar waxaa dhexmara dagaal beeleedyo wejiyo badan leh.
Dawladda Federalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug ayaa ka gaabsadeen in ee arinkaan ka hadlaan.
Isha ku haay KGN waxii war ah ee kasoo kordha dagaaladaan ka soo cusboonaaday Gobalka Galgaduud.
Daawo:- Seefullahi oo isku soo dhiibay Ciidamadda Dawladda Federalka.